UMotshekga weseke ophenywa ngolwezincwadi | isiZulu
UMotshekga weseke ophenywa ngolwezincwadi
Sekuhanjiswa izincwadi zangonyaka ozayo - Umbiko
Owe-DA ugxeke uMotshekga we-ANC
Cape Town - UNgqongqoshe woMnyango wezeMfundo eyisiSekelo u-Angie Motshekga, useveze ukweseka kwakhe uMqondisi JIkelele woMnyango uBobby Soobrayan, ophenywa ngodaba lokungahanjiswa kwezincwadi zabafundi baseLimpopo kusanesikhathi.
"Indaba yokuthi uyaphenywa ayichazi lutho ngesithunzi sakhe emsebenzini. Indaba imayelana nokuhlela izinto ngesikhathi esifanele nokuthi walandelisisa yini imigomo," kusho ungqongqoshe ekhuluma nezindabeni ze-567CapeTalk.
"Kumayelana nokuthi ikhona yini indlela engcono ayengenza ngayo izinto, kuthi ukushesha. Ilokho iPublic Services Commission ephenya ngakho."
Enkulumeni yaphambili kangqongqoshe nalo msakazo, wancoma kakhulu uSoobrayan.
Ngenyanga ka-Okthoba uMengameli uJacob Zuma wanquma ukuthi kuphenywe uSoobrayan, mayelana nokwehluleka koMnyango ukuhambisa izincwadi kusanesikhathi.
Kuthiwa uSoobrayan washaya indiva incwadi eyabhalwa ngabashicileli bezincwadi ngesikhathi bemazisa ukuthi abakalitholi i-oda lezincwadi zonyaka.